Igumbi leHotele yezeMbali kuMlambo iTrinity - I-Airbnb
Igumbi leHotele yezeMbali kuMlambo iTrinity
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguKatie
Ihotele yaseLewiston ibonelela ngamagumbi amathandathu eendwendwe "Old West" ahlala phezu kwendawo yokutyela kunye nebar (evulekileyo ngoLwesibini-ngoMgqibelo) ejonge iihektare ezi-2 zengca ekhokelela ezantsi kuMlambo iTrinity. Amagumbi akhululekile kwaye anomtsalane- kodwa akanazo izinto zale mihla- iincwadi, imidlalo yebhodi, kunye nezinto ezintle ngaphandle ziyafumaneka ukuba uzonwabele! Olu luhlu lolwegumbi eli-1 kumgangatho wesibini elinebhedi enkulukazi- amagumbi okuhlambela okwabelwana ngawo abekwe epasejini- akukho gumbi lokuhlambela labucala.
ILewiston Hotel Bar & Grill ivula ngoLwesibini- ngoMgqibelo ezantsi. Yonwabele i-libations kunye nesidlo sangokuhlwa kwipatio yethu yangaphandle nje amanyathelo kude noMlambo iTrinity. IHotele ihleli kumgama omfutshane womlambo othi "Flyfishing Catch & Release Only". Nangona kunjalo, uhambo olufutshane oludlula ibhulorho unako ukuloba kwaye ubambe umnqweno weentliziyo zakho (ngaphakathi kweentlanzi kunye nemimiselo yemidlalo ngokuqinisekileyo!) Ezinye iintlobo onokuzifumana ziyi-trout emdaka, i-steelhead, kunye ne-salmon yokumkani.
Ngaba ucinga ngakumbi into yakho? Siyisiqingatha sebhloko kude kwiMarike ye-County Peddler Antique & Deadwood Trading Post- nceda ujonge iiwebhusayithi zabo ngeeyure zangoku zonyaka. Apho uya kufumana uluhlu oluhlala lutshintsha lwezinto ezifunyenweyo eziya kwenza utyelelo ngalunye lube lusuku olumnandi lwe-antiquing kunye nokuhlola ubugcisa bendawo. Thatha uhambo oluhle lwemizuzu eli-15 ukuya e-Weaverville apho uya kufumana i-The Merchant Mall kunye negcuntswana leevenkile zamandulo-asinakunqongophala kwezinto zakudala kunye nekhubalo elidala kwi-Trinity County!
Ukuba ujonge i-adventure, cwangcisa uhambo lokuloba kunye neTrinity Fly Shop, yonwabele ukungcamla iwayini kwiMaphu eNye yeWinery nakwiAlpen Cellars, okanye uchithe imini kwenye yeendlela ezininzi zokuhamba ezisingqongileyo.
Amagumbi akhululekile kwaye anomtsalane- kodwa akanazo izinto zale mihla- iincwadi, imidlalo yebhodi, kunye nezinto ezintle ngaphandle ziyafumaneka ukuba uzonwabele! Nceda usazise ukuba ukhangela ntoni kwaye siyakuvuyela ukukuseta ngeekhenkethi zalapha kunye nezikhokelo.
Ifakwe "kwiDowntown yeMbali yaseLewiston" kunye nakuMlambo iTrinity sikuhambo olufutshane ukuya kwezi zinomtsalane:
Isithuba sokuRhweba i-Deadwood- Izinto zamandulo kunye noBugcisa beNdawo
Imarike yaseLewiston yasekhaya
Ithala leencwadi leNdlu yeSikolo
Icawa yase-Old Lewiston
Ibhulorho yeNdlela enye yaseLewiston
*ukufikelela kokufakwa kwizikhephe phantsi kwebhulorho
Ukuhamba nje okufutshane uya kufumana iLewiston Lake (ichibi lamanzi abandayo) kunye neTrinity Lake kunye neendlela ezininzi zokuhamba.
**iiyure kumashishini angqongileyo ziyahluka ngokwamaxesha onyaka
Abasebenzi bayafumaneka kunye nombuzo ngexesha leeyure zokusebenza kwiBar & Grill. I-Air BNB host ifumaneka nge-Air BNB messenger kwaye ingena kwaye iphuma kwipropathi yonke imihla.